iMac (faramparan'ny taona 2009)
Ny iMac dia isan-karazany ny solosaina desktop rehetra-in-iray natao sy vokarina amin'ny Apple. Izany dia fototra ampahany mpanjifa biraonao solosaina natolotry ny Apple nanomboka ny fampidirana tamin'ny taona 1998, ary efa nivoatra amin'ny alalan'ny efatra miavaka tsara endrika.
Ny modely ao an-tsipiriany[hanova | hanova ny fango]
Amin'ny endriny tany am-piandohana, ny iMac H3, ny iMac dia miendrika atody amin'ny efijery ny CRT , izay kely indrindra amin'ny miloko, translucent plastika. Ny faharoa lehibe hanatsarana ny iMac G4, nifindra tany amin'ny famolavolana ny hemispherical fototra izay hita rehetra ny fototra ao amin'ny ordinatera, ary ny varavarana lamba LCD nitaingina ny malalaka mampihetsi-po ny sandriny tia ny an-tampony ny fototra. Ny iMac G5 sy ny Intel iMac apetraka rehetra ny fototra ao amin'ilay ordinatera, ao ambadiky ny lamba, ny famoronana slim miray endrika izay tilts ihany no niakatra sy nidina teo tsotra vy fototra. Amin'izao fotoana izao iMac mizara mitovy endrika amin'ny dikan-teny teo aloha, fa dia thinner sy mampiasa aluminium sy ny mainty-comma-fitaratra ho an'ny lovia.
Ny fanambarana ny iMac loharanon ' ny fifanakalozan-kevitra ary miandry eo ny mpaneho hevitra, mpanohana ny Mac, sy mpanaratsy. Mizarazara ny hevitra nandritra ny fiovana lehibe ny Paoma ny fanorenana ara-nofo ny Macintosh. Tamin'izany fotoana izany, ny Paoma dia miezaka ny hanatsara ny varotra paikady. Paoma dia nilaza fa " ny indray ny solosaina toa tsara noho ny anoloan'ny ny hafa ".
Apple ihany koa nilaza fa ny "izaho" ao iMac maneho ny aterineto sy ny mifantoka amin'ny vokatra ho toy ny fitaovana manokana ("izaho" ho "olona"). Ny saina no nanome ny aina izay nanatanteraka ny basic setup rehefa mividy ny vokatra: ny mpampiasa dia tsy maintsy mandalo ihany dingana roa ny fomba hidirana amin'ny Aterineto.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=IMac&oldid=795176"
Voaova farany tamin'ny 14 Janoary 2017 amin'ny 20:08 ity pejy ity.